Mid kamid ah mas’uuliyiinta muslimiinta Ruushka ayaa sheegay in la filayo dhowr iyo toban sano kadib koror aad u baahsan oo ku yimaada tirada muslimiinta Ruushka. Raawi Ceynu-diin oo kamid ah A’imada muslimiinta dalkaas ayaa sheegay in dadka qaadanaya diinta islaamka ay aad usoo badanayaan, isagoona sheegay iney filayaan iney aad u kororto tirada muslimiinta 15 sano ee soo socda. ...	Read More »
Iyadoo dhibaatada Imaaraadku ku hayo bulshada degan koonfurta Yaman ay aad u korortay, islamarkaana gaartay heer aan la suureysan Karin, ayaa hadda waxay billaabeen shacabku iney si toos ah uga horyimaadaan dowladan iyo siyaasadeeda. Gobolka Cadan oo kamid ah gobollada ugu weyn ee koonfura Yaman, ayaa maalintii sadexaad magaalooyin katirsan waxaa ka socda banaanbaxyo waaweyn oo ay dhigayaan dad weynaha. ...	Read More »
Iyadoo weli banaanbaxyada ka dhanka ah xukuumadda uu hogaamiyo Cabdil-caziiz Butafaliqa, madaxweynaha wadanka Aljeeriya ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambeysa ayaa waxaa muuqanaya isbedel hor leh oo ay arintan lugaha lasii geleyso. Labo Xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka wadankaas, midkoodna uu horey usoo nqoday wasiir ayaa ku dhawaaqay iney is casileen, sababo ku aadan iyagoo cabasho ka ah musharaxnimada ...	Read More »
Inkabadan 40 Askari oo katirsan Nuseyriyada Oo lagu dilay Suuriya.
Dagaalyahanno katirsan jamaaco jihaadi ah oo lagu magacaabo Ansaaru-Towxiid ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaanno katirsan gobolka Xammaah ee bartamaha Suuriya, halkaas oo uu gacanta ku hayo maamulka Nuseyriyada Bashaar Al-asad Weerarka oo dhacay aroornimadii hore ee maalintii shalay oo axad ahayd , waxaa Inqimaasiyiin katirsan Ansaaru-Towxiid ay ku qaadeen labo aag oo ku yaala deegaanka Al-masaasina ee gobolka ...	Read More »
397 Askari Oo ku dhintay Weerarkii Shawaarib ee dalka Afqanistaan.(Dhagayso)
Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay inuu soo idlaaday howlgalkii weynaa ee maalintii Jimcaha ahayd ciidamo katirsan Imaarada ay ku qaadeen saldhiga Shawaarib oo ah saldhig millitery oo ay ku sugnaayeen ciidamo Maraykan ah iyo kuwa xukuumadda Kaabul. Weerarka oo qaatay 46 saacadood oo xiriir ah, ayaa waxaa la xaqiijiyay in lagu dilay 397 ...	Read More »
Aala-Sucuud Oo Dhalashada kala laabtay Xamza bin Usaama bin Laadin.
Xamza Sheekh Usaama bin Laadin oo kamid ah saraakiisha mujaahidiinta Al-Qaacida, ayay dowladda reer Aala Sucuud kala laabatay dhalashadiisii. Wasaaradda arimaha gudaha ee maamulkaas ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in dhalashada ay kala laabatay Xamza bin Usaama. Bayaanka ay soo saareen oo lagu baahiyay Wargeys uu maamulku leeyahay oo lagu magacaabo Umul-Quraa, laguma sheegin sababaha rasmiga ah ...	Read More »
Xog Uruurin: Inta badan Shacabka Kenya kuma kalsoona madaxweyne Uhuru Kenyata.
Natiijo kasoo baxday afti uruurin laga sameeyay wadanka Kenya ayaa muujineysa in inta badan shacabka Kenya aaney ku kalsooneyn madaxweyne Uhuru Kenyata oo sanooyinkii u dambeeyay ay soo badanayeen dadka kasoo hor jeeda. Afti uruurintan oo loogu magacdaray “ Sowti wa nananshi” ayaa natiijadeeda waxaa lagu dhawaaqay maalintii Jimcaha ahayd, waxayna banaanka soo dhigtay in 82% shacabka Kenya ay aaminsanyihiin ...	Read More »
Dhaalibaan oo Maalintii Sadaxaad Hawlgal ka wada saldhig Maraykanku ku leeyahay Afqanistaan.
Weli waxaa socda howlgalka Jimcihii lasoo dhaafay ay ciidamada Imaarada islaamiga ee Afqanistaan ku qaadeen saldhig ay askarta Maraykanka ku leeyihiin gobolka Helmand ee dhaca koonfurta wadankaas. Howlgalka oo galay maalintii sadexaad ayaa u muuqda mid ay ciidamada Maraykanku awoodi la’yihiin iney soo afjaraan, iyadoona tobanaan katirsan Naftood huriyaasha Imaarada aj ay ka dhex dagaallamayaan dhismaha saldhiga Shawaarib. Imaarada islaamiga ...	Read More »
Ciidamada Imaaarada islamiga ee Afqaanistan ayaa weli wada howlgal ballaaran oo aroornimadii hore ee maalintii shalay ku qaadeen saldhig weyn oo gobolka Helmand ku leeyihiin ciidamada Maraykanka ee duulaanka ku jooga wadankaas. Saldhiga Shawaarib oo ah saldhig milliteri oo ay deganyihin guutooyin farabadan oo katirsan ciidamada Maraykanka iyo kuwa kumaandooska xukuumadda Kaabul ayaa la kulmay weerar adag oo ay ku ...	Read More »
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 24-06-1440
Barnaamijka Dhacdooyinka dunida islaamka waa todobaadle maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan laguna soo qaato akhbaaraadkii ugu waaweynaa caalamka. Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 01-03-2019 Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 01-03-2019.lite	Read More »